Ireo Mpampitahotra Goavana Sy Ratsy Ao amin’ny Fampitam-Baovao Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2014 23:55 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Français, Español, English
Tsy tsara ny tontolon'ny fampitam-baovao ao Rosia amin'izao fotoana izao. Efa zatra ny famelezana ireo fanta-daza ao amin'ny TV Rain, fantsom-baovao tokana mahaleotena ao Rosia, sy ny fandrahonam-pitoriana ny Akon'i Moskoa, fantsom-pampielezam-peo malaza indrindra ao amin'ny firenena, ary an'i Alexey Navalny, bilaogera ara-politika malaza indrindra ny mpamakin'i Akon'i RuNet. Amin'ireo tranga tafiditra rehetra ireo ny vaovao mivoaka an-tserasera dia heverin'ny mpanao politika sy ny fampitam-baovao mpitana ny mahazatra ho tsy misy fitiavan-tanindrazana. Ny TV Rain namoaka fitsapa-kevitra manontany ny mpijery hanombana ny famelana an'i Leningrad ho an'ny Nazis nandritra ny ady lehibe faharoa; Ny Akon'i Moskoa namoaka ny lahatsoratr'i Victor Shenderovich, mampitaha tranga maro tamin'ny lalao olaimpikan'i Sochi amin'ny Lalaon'i Berlin tamin'ny 1936; ary Navalny nanao hatsikana feno ankamantatra momba ny mpitsara iray nisy namono tany Okraina, toy ny manambara ankolaka fa mety hahazo ny mpitsara Rosiana ihany koa izany.
Vaky io fanjohin-kevitra io, tamin'ny herinandro, rehefa nanokana fandaharana [ru] iray manontolo tao amin'ny radio ilay mpanao gazety malaza ao amin'ny onjampeo sy fahitalavitra rosiana Vladimir Solovyov hamakivakiana bantsilana sy hiampangana ireo siokantserasera manohana ny Maidan ataon'ny mpianatry ny Sekoly Ambony momba ny Toekarena ao Moskoa. (Jereo amin'ny teny Rosiana ny tatitra amin'ny antsipirihany ataon'i Sultan Suleimanov momba io raharaha manafintohina io.) Mizaka ny famantrapatraran'i Solovyov, voaviravira (tsy nisy fifanatrehana) ho mitia olom-pirenena Okrainiana pelaka i Yulia Arkhipova.
Heverina ho nianatra tamin'i Arkhipova noho i Vitalii Milonov, mpanolotsainan'ny tanànan'i St. Petersburg malaza tamin'ny fanenjehana amin'ny alalan'ny fitoriana eny amin'ny fitsarana tao Rosia nandritra ny “propagandin'ny pelaka” tamin'ny 2011 i Solovyov. Nandray an'i Arkhipova i Milonov andro iray mialoha ilay fandaharana tamin'ny radio, nanesoeso azy tamin'ny fiahiany ireo mpanao fihetsiketsehana maratra ao Kiev [ru] sady nanandratra ny fanahiany “diso toerana” ho ohatry ny tsy fahombiazan'ny fampianarana ambony rosiana. Rehefa naneso an'i Solovyov i Arkhipova taty aoriana, nanoratra [ru] “manokana ho azy” tao amin'ny Twitter fa nanao ny akanjo nenti-paharazana Okrainiana i (Arkhipova) fa manana ny pasipaoro Rosiana ao amin'ny poketrany, dia namaly i Solovyov tamin'ny filazana [ru] fa “mbola lò ny fanahiny,” na dia efa miova aza ny akanjony.
Nahoana i Solovyov no nanenjika vondrona mpianatra oniversite tsy fantatra noho ny fandefasana siokantserasera mifandraika amin'i Okraina? Na i Arkhipova aza dia namoaka ny petra-kevitra fa i Dmitri Kiselyov—izay vao nasondrotra, ho mpanao gazety akaiky an'i Kremlin izay tsy sasatry ny mahatezitra ny fiarahamonina liberaly amin'ny famelezana hatrany ny Rosiana mpanohitra—no nampakatra avoavo kokoa ny tanjona amin'ny fanoavana ao amin'ny tontolon'ny fampitam-baovao rosiana. Mpanohana an'i Putin mpiady hevitra efa hatry ny ela i Solovyov, saingy mbola vasoka izany fanaony mahazatra izany raha mitaha amin'i Kiselyov, izay manao an'i Milonov ho tahaka an'i Harvey Milk, raha (tao amin'ny fahitalavi-pirenena tamin'ny 2012) tompon-daka tamin'ny filazana fa mila dorana ny fon'ny pelaka tratran'ny lozam-pifamoivoizana. Lasa mora tafintohina amin'ny zavatra roa tena fitenin'ny liberalisma rosiana dia ny fitsikerana ny Kremlin sy ny fiderana ny Tandrefana ny fanaovan-gazety malaza sy ny adihevitra mandritra ny vanim-potoanan'i Kiselyov.
Mandritra izany fotoana izany i “Vyshka” (araka ny fahafantarana mahazatra ilay oniversite) nanao izay azony natao mba hitoetra ambonin'izany fifandirana izany. Tamin'ny 21 Febroary 2014, namoaka naoty tao amin'ny pejy Facebook-ny ny sekoly milaza ny fihetsik'i Solovyov ho “fihantsiana.” Namoaka ny sarin'i Mark Twain ihany koa ilay pejy ary misy izao tsonga-teny izao: “Aza mifamaly amin'adala na oviana na oviana, hampidina anao eo amin'ny ambaratonga misy azy ireo ary handresy anao amin'ny alalan'ny fahazarany.”
Soratra miverina: Avy Any Kiev Mankany Moskoa: Hetsika Ao Rosia Mitondra KodiaranaFrom Kiev to Moscow: Russia’s Tired Protest Antics · Global Voices teny Malagasy
[…] Arkhipova, mpianatra toekarena izay vao Tafiditra anatin'ny ady mangotraky ny Twitter [Tatitra Global Voices amin'ny teny malagasy] tamin'ny nitafatafa nifanaovana tamin'i […]
25 Febroary 2014, 23:21